Nezvedu - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co, ltd.
Nhanganyaya Yedu Pfupi
Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co, ltd. yakagadzwa muna 2011, inyanzvi yekugadzira inoita mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yeiyo chubhu yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina, yekuzadza capping muchina, plasitc ampoule yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina, kumeso kumeso kurongedza muchina, yakakwira frequency epurasitiki yekuwachina muchina, ultrasonic epurasitiki yakatetepa muchina, epurasitiki vharuvhu vanoumba muchina, mhoni chisimbiso muchina, dzokera kurongedza muchina, nezvimwewo.
HengXing's kurongedza michina anoshandiswa zvakanyanya muzvizoro, mishonga, chikafu, mapurasitiki nemamwe maindasitiri. Mazhinji zvigadzirwa zvedu zvakawana CE uye RoHS zvitifiketi.
Hengxing yakazvipira mukusimudzira kweiyo ultrasonic tekinoroji, ichibatanidza iyo otomatiki tekinoroji neiyo ultrasonic tekinoroji zvakakwana mupurasitiki chubhu yekuisa chisimbiso muchina, kukunda matambudziko echinyakare kupisa chisimbiso, kuita zvakanyanya kuchena uye kusimbisa kusimbisa. Kuburikidza nekuenderera mberi kwesimba rehunyanzvi timu yedu, isu takawana huwandu hwezvitupa zve patent, zvichitungamira ultrasonic tekinoroji maitiro ekurongedza uye ekushambadzira michina.
Hengxing, ine timu ine shungu uye ine ruzivo, inogara iripo kuti uongorore zvaunoda uye nekukupa mhinduro dzinoshanda uye udzokere kwauri munguva. Mumakore achangopfuura, kambani yedu yakagadzira yemhando yepamusoro kamuri chubhu muchina, monodoze chubhu muchina uye epurasitiki ampoule yekuzadza nekuisa chisimbiso muchina wezvizoro maindasitiri. Hengxing inogara ichitevera zvakanyanya nemusika maitiro.
Yakasimba R & D timu, yakaoma maitiro ekuyedza, ichigadzira iyo michina mhando yepamusoro.
Yakanaka pakugadzira zvemuchina chikamu, yakazvipira mune yega yega ruzivo, ichiita iyo michina kugadzikana.
Kuunza kusimbiswa uye kubatsirwa, chengetedza mutengi kugutsikana mune yedu basa.